တွင်း ဟောင်း ရေ ကြည် အေး မြ သည် – Hlataw.com
တခြားယောကျာင်္းတွေတော့ မသိ ကျနော်ကတော့ မိန်းမရမယ် ဆိုရင် အပျိုထက် အိမ်ထောင်သည်မိန်းမ သို့မဟုတ် တစ်ခုလပ်မိန်းမတွေကိုရတာပိုကြိုက်တယ်ဗျာ။ အပျိုရဲ့အ ဖု တ်ကကျဉ်းတော့ တဲ့အခါကျဉ်းကျပ်တဲ့အတွက် အရသာပိုကောင်းတာတော့မှန်တယ် သို့သော်..အိမ်ထောင်သည်မိန်းမတွေကိုသလို စိတ်ထင်တိုင်းဆောင့်ဆောင့်လိုးလို့မရဘူးလေ အဲ့လိုစိတ်ထင်တိုင်းဆောင့်ဆောင့်မလိုးရပဲ ညင်ညင်သာသာလေးပဲလိုးပေးရတာ ကိုယ့်စိတ်ထဲမှာအားမရတဲ့အတွက် အပျိုထက်အအိုကိုပိုလိုးချင်တယ်ပြောတာပါ။ အခုကျနော်ရေးတင်မည့်ဇာတ်လမ်းကတော့ စတိုးဆိုင်ပိုင်ရှင် အိမ်ထောင်သည်မိန်းမတစ်ယောက်နဲ့ လိုးဖြစ်ပုံဇာတ်လမ်းဆိုကြပါစို့ဗျာ။ သူ့နာမည်ကို’မေ’လို့ခေါ်ရလွယ်ခေါ်ရအောင်ဗျာ ကျနော့်ထက်ကြီးတော့’မမမေ’လို့ဆိုကြပါစို့။ ‘မမမေ’ကကလေး၃ယောက်ရဲ့အမေပါ ဒါပေမယ့် သူ့အိုးကတောင့်သလို နို့တွေကလဲတွဲမနေပဲ အခုထိဆွဲဆောင်မှုကအပြည့်ရှိတယ်လေ ဘော်ဒီကအမို
က်စားမို့ ကျနော်အရမ်းလိုးချင်လို့လိုက်ခဲ့တာပါ။ ဒီနေရာမှာသယ်ရင်းတို့ကို အကြံပြုလိုတာတစ်ခုရှိပါတယ် သယ်ရင်းတို့အနေနဲ့ အိမ်ထောင်ရှိမိန်းမတွေကိုလိုက်မယ် (အရှင်းဆုံးပြောရရင် လိုးရဖို့ကြိုးစားမယ်)ဆိုရင် ပထမဆုံးသူတို့နဲ့ရင်းနှီးအောင်အရင်လုပ်ကြပါနော် အပျိုတွေကိုလိုက်သလို ဘာမှမသိသေးပဲနဲ့ လမ်းမှာစကားလိုက်ပြောလို့ကတော့ ပါးကွဲမလားအချုပ်ထဲရောက်မလား တစ်ခုခုသာမျှော်ပေတော့ပဲ ဟိုကအအိုလေ သူ့ဘက်ကစိတ်ပါဦးတော့ ပက်ဝန်းကျင်အခြေအနေအရ ဟန်လုပ်ပြီး ရှက်ရမ်းရမ်းမှာပဲလေ အဲ့ဒါကိုမမေ့ကြပါနဲ့လို့အကြံပေးချင်ပါတယ်။ နောက်ထပ်ပြောချင်တာတစ်ခုကတော့ အိမ်ထောင်ရှိမိန်းမပင်ဖြစ်ပါစေ ၁၀ယောက်မှာ ၈ယောက်လောက်ကတော့ ပက်ဝန်းကျင်သာမသိစေမရိပ်မိစေနဲ့ လင်ငယ်ထားချင်ကြတာကများတယ်ဆိုတာ ကျနော့်အတွေ့အကြုံအရသိထားပါတယ်။ ‘မမေ
မ’ကိုတွေ့တိုင်း သူ့ရဲ့ဖင်တွေနို့တွေကိုကြည့်ပြီး လီးတောင်ရတာဆိုတာခဏခဏပဲ စိတ်ထဲမနေနိုင်တော့ဘူး လိုးရဖို့ကြံမယ်ဆိုပြီး လိုက်တော့တာပဲ။ သူကစတိုးဆိုင်ဖွင့်တာဆိုတော့ စကားပြောဖို့အခွင့်အရေးကတပန်းသာတယ်လေ လိုတာလေးတွေရှိရင် ‘မမမေ’ရဲ့ဆိုင်ကိုပဲအမြဲသွားဝယ်တယ် သူ့အမျိုးသားနဲ့တခြားလူတွေရှိတဲ့အချိန်ဆို အလိုက်တသိစကားမပြောပဲနေပြီး သူတစ်ယောက်ထဲရှိချိန်တွေမှ ကျနော်ကစကားမရှိစကားရှာပြီး ရင်းနှီးအောင်လုပ်ရတာပေါ့ ။ ဒီလိုနဲ့တဖြေးဖြေးခင်လာပြီဆိုမှ ph noတောင်း အပြင်မှာမုန့်စားလေးဘာလေးခေါ် ‘မမမေ’ကဘယ်လိုလှကြောင်း ဘယ်လိုဆွဲဆောင်မှုရှိကြောင်းတွေ့တိုင်းချီးကျူးပေးသလို သာယာတပ်မက်တဲ့အကြည့်မျိုးတွေနဲ့ မကြာခဏကြည့်ပေး ဒီလိုနဲ့’မမမေ’ဘက်ကလဲ ကျနော့်ကိုစိတ်ဝင်စားလာပြီလို့ ယူဆရတဲ့အချိန်မှာ ကျနော်သူ့ကိုချ
စ်ရေးဆိုတာမှာ okတော့တာပဲဗျာ။ ပထမဆုံး’မမမေ’နဲ့ဟိုတယ်မှာတွေ့ဖို့ချိန်းတော့ ကျနော်တို့ရပ်ကွက်နဲ့ဝေးတဲ့ မြို့သစ်ဘက်က ဟိုတယ်တစ်ခုခုမှာပဲတွေ့ဖို့ ‘မမမေ’ကပြောတာနဲ့ မြို့သစ်ထဲကဟိုတယ်တစ်ခုမှာတွေ့ကြပါတယ်။ လိုရင်းသွားကြစို့ဗျာ အခန်းထဲရောက်တော့ ကျနော်လဲနောက်ကနေသူ့ကိုဖက်လိုက်ပြီး ‘ပျော်လိုက်တာမမမေရယ် ဒါလောက်လှတဲ့မမနဲ့အခုလိုတွေ့ခွင့်ရတာ အရမ်းပျော်တာပဲ’လို့ပြောပြီး နောက်ကဖက်ထားရင်း နို့တွေကိုကိုင်တော့တာပေါ့ ‘မမလဲအရမ်းပျော်တာပါမောင်ရယ်’တဲ့. သူကပြန်ပြောတယ်လေ။ ကျနော်မမမေကိုပွေ့ပြီး ကုတင်ပေါ်တင်လိုက်တယ် သူ့ဘေးမှာအတူလှဲအိပ်ရင်း လက်ကခါးကိုဖက်ထားရင်း ပါးလေးကိုမွှေးလိုက်တော့ မမမေကပြန်မွှေးပေးတယ်လေ။ မမမေရဲ့နှုတ်ခမ်းလေးကိုkissingဆွဲတော့ သူကလဲကျနော့်လည်ပင်းကိုဖက်ပြီး အားပါးတရပြန်ပြီးkissingပြန်ဆွဲပေးတာပေါ့ သူ့မျက်လုံးလေးတွေကိုမှေးစင်းထားရင်း ကျနော်နှုတ်ခမ်းတွေကို အားပါးတရပြန်နမ်းပေးတဲ့ ‘မမမေ’ရဲ့မျက်နှာလေးကိုကြည့်မိတော့ စိတ်ထဲမှာအရမ်းကျေနပ်မိတယ်။ နှုတ်ခမ်းတွေကိုနမ်းပေးနေချိန်မှာ ကျနော့်လက်ကအငြိမ်မနေဘူးလေ နို့တွေကိုင်ပေးလိုက်
အဖုတ်ကိုနှိုက်ပေးလိုက်နဲ့ကလိပေးတော့ ‘မမမေ’လဲစိတ်ပါလာပြီး တအင်းအင်းနဲ့ငြီးလာပါတော့တယ်။ ဒါလောက်နဲ့ကျနော်မမမေရဲ့အဖုတ်ထဲကို ကျနော့်လီးထဲ့ပြီးလိုးမပေးသေးပါဘူး ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုရင် အိမ်ထောင်ရှိမိန်းမတွေနဲ့လိုးတဲ့အခါ သူတို့ကိုယ့်အပေါ်နောက်ထပ်လဲခံချင်အောင် ပညာကုန်သုံးရပါတယ်။ သူတို့ယောကျာင်္းတွေနဲ့အမြဲအလိုးခံနေကြဆိုတော့ သာမန်အလိုးခံရတဲ့feelingမျိုးထက်ပိုပြီး သူတို့ဘက်ကမျှော်လင့်တတ်ကြပါတယ်။ ဥပမာ.. နှူးနှပ်ပေးလို့ သူတို့ဘက်ကစိတ်ပါလာချိန်မျိုး အဖုတ်ယက်ပေးတာမျိုး လီးကြီးကြီးနဲ့အကြာကြီးလိုးပေးတာမျိုးတွေကို သူတို့မက်မောကြပါတယ်။ နို့တွေကိုင်အဖုတ်နှိုက်kissingဆွဲပေး တပြိုင်တည်းလုပ်ပေးနေတော့ မမမေစိတ်အရမ်းပါလာတယ်ဆိုတာကို သူ့အဖုတ်က အရေတွေထွက်လာနေတာနဲ့သိသာပါတယ်။ အခုချိန်စလိုးရင်လဲ သူသဘောကျမှာသေ
ချာပါတယ် ဒါပေမယ့်…ကျနော်မလိုးသေးပဲ မမမေရဲ့အဖုတ်လေးကို ဘာဂျာမှုတ်ပေးဖို့ဟန်ပြလိုက်ပါတယ်။ အဖုတ်လေးကဖွေးပြီးဖောင်းကားနေသလို အမွှေးလေးတွေကမထူမပါးနဲ့ အရမ်းကိုကြည့်လို့ကောင်းပါတယ်။ ကလေး၃ယောက်အမေမို့လားမသိ အဖုတ်ကနည်းနည်းတော့ပြဲနေပြီလေ ကျနော်ကကုတင်ဘေးမှာရပ်ပြီး မမမေကိုကုတင်စောင်းဘက်ဆွဲမလိုက်တော့ မမကလဲအလိုက်သင့်ထပြီး ကုတင်စောင်းမှာထိုင်ပြီးလှဲပေးပါတယ် ကျနော်အဖုတ်ယက်ပေးတော့မယ်ဆိုတာ သူအလိုလိုသိတဲ့အဓိပ္ပါယ်ပေါ့ဗျာ။ ကျနော်ကကုတင်စောင်းဘေးမှာ ဒူးထောက်ထိုင်ချလိုက်ပြီး ‘မမမေ’ရဲ့ခြေထောက်နှစ်ချောင်းကိုကားလိုက်ပါတယ် ခြေထောက်၂ချောင်းကိုကားလိုက်တော့ အဖုတ်လေးဟပြဲသွားတဲ့မြင်ကွင်းကို အခုထိပြန်တွေးလိုက်တိုင်းလီးတောင်ရပါတယ်။ မမမေရဲ့အဖုတ်တစ်ခုလုံးကိုသိမ်းကျုံးပြီး
အားရပါးရစုပ်ပေးလိုက်တော့ “အား..မောင်.အ.. အ” နဲ့ မမမေခမျာငြီးတော့တာပါပဲ။ ကျနော်လဲအဖုတ်နှုတ်ခမ်းသားလေးတွေကို ခပ်ဖွဖွလေးကိုက်လိုက် အဖုတ်တစ်ခုလုံးလျှာနဲ့ယက်လိုက် လျှာထိပ်လေးနဲ့အဖုတ်ထဲကိုမွှေပေးလိုက်နဲ့ ၁၀မိနစ်လောက်လုပ်ပေးနေတော့လေ မမမေဟာကျနော့်ခေါင်းကို သူ့လက်နှစ်ဖက်နဲ့ဖိကိုင်ထားရင်း ဖင်တွေကြွလာလိုက် ဟိုဘက်လှိမ့်လိုက် ဒီဘက်လှိမ့်လိုက်နဲ့ ‘အား..မောင်..အ.. အ’ နဲ့ မနားတမ်းငြီးလာတော့တာပဲဗျာ။ ၁၀မိနစ်လောက်ယက်ပေးနေတော့ မမမေအရမ်းစိတ်ပါလာပါပြီ “မောင် မမမနေတတ်တော့ဘူး လိုးပေးပါတော့”..လို့ပြောလာပါတော့တယ်။ ကျနော်ကဒီလိုအချိန်မှာလိုးပေးချင်တာလေ ဒါမှလဲနောက်ဆိုမကြာမကြာလိုးပေးဖို့ သူကခေါ်မှာကိုဗျ။ အဖုတ်ယက်နေတဲ့အနေအထားကနေ ကျနော်မတ်တပ်ရပ်လိုက်ပါတယ် မမမေရဲ့ခြေထောက်၂ချောင်းကို ပခုံးပေါ်ထမ်းတင်လိုက်ပါတယ် ကျနော့်ရဲ့လက်၂ဖက်က မမမေရဲ့နို့၂လုံးကိုလှမ်းဆွဲလိုက်ပြီး လိုးဖို့ဟန်ပြင်တော့တာပေါ့ ‘မမမေ’ကအရမ်းကိုအလိုက်သိတယ်ဗျာ ကျနော့်လီးကိုသူ့လက်နဲ့လှမ်းကိုင်ပြီး သူ့အဖုတ်နဲ့တေ့ပေးတယ်လေ ကျနော့်လီးကိုအဖုတ်ထဲစသွင်းတဲ့အခါ မမမေကမျက်လုံးလေးကိုမှေးစင်းထားပြီး ငြိမ်ခံနေပါတယ် ကျနော်လဲဆက်တိုက်ဆိုသလို လီးကိုအားရှိသလောက်အဆုံးထိ သွင်းလိုက်ထုတ်လိုက်နဲ့ရှယ်လိုးတော့တာပေါ့ ‘မမမေ’လဲအား…အင်း..နဲ့ငြီးရင်း အရမ်းကိုကောင်းနေပုံပါပဲ ‘မမကောင်းလားဟင်’ဆိုတော့ ‘အရမ်းကောင်းတယ်မောင်’တဲ့ အဲ့လိုအနေအထားနဲ့၁၀မိနစ်လောက်လိုးပေးရင်း ‘မမ နောက်ကနေလိုးချင်တယ်’ပြောတော့ ထပြီးလေးဘက်ကုန်းပေးတယ်လေ doggy styleဆိုတဲ့ လေးဘက်ကုန်းအနေအထားဟာ သာမန်အိုးမတောင့်တဲ့မိန်းမတွေကိုတောင် အိုးတောင့်သလိုထင်ရပါတယ် မမမေဟာ အိုးတောင့်သူမို့ ကုန်းထားချိန်မှာသူ့အိုးကိုကြည့်ရတာ တကယ့်feelပါပဲဗျာ။ ကျနော်လဲ မမမေရဲ့ခါးကိုဆွဲပြီး နောက်နေအားရှိသလောက် ဆောင့်ဆောင့်လိုးပေးတာပေါ့ ဒီနေရာမှာကြားဖြတ်ပြောရရင် doggy style လိုးရတာဟာ အဖုတ်ရဲ့အဆုံးသားအိမ်ကိုထိသလို လိုးအားဆောင့်အားလဲပိုကောင်းတဲ့အတွက် ကျနော်အကြိုက်ဆုံးပုံစံပါပဲ။ အဲ့လိုနောက်ကနေခါးဆွဲပြီး အစွမ်းကု
န်ဆောင့်ဆောင့်လိုးပေးတော့ မမမေလဲ အား အင်း နဲ့အော်ရင်းငြီးရင်း ‘အား..မောင်..အရမ်းကောင်းတယ်ကွာ ထိတယ်.ဆောင့်..ဆောင့်’နဲ့ပြောတော့တာပဲ အဲ့လိုနောက်ကနေလိုးတာ မိနစ်၂၀လောက်ကြာလာတော့ ‘မောင်မောနေမှာပေါ့ မမအပေါ်ကဆောင့်ပေးရမလား’တဲ့ ပြောလာတယ်လေ. မမမေကအဲ့လိုအလိုက်သိတာပါဆို။ အဲ့ဒါနဲ့ကျနော်ကပက်လက်အိပ် မမကအပေါ်ကတက်ဆောင့်နဲ့ ၁၀မိနစ်လောက်အကြာမှာ “မောင် မမပြီးတော့မယ်”တဲ့ အား..အားနဲ့ပြောရင်း ၁၀ကြိမ်လောက်ထပ်ဆောင့်ပြီးတော့ ‘အား..မောင်..အ.. အ’နဲ့အော်ရင်း သူ့ရဲ့အောက်နှုတ်ခမ်းလေးကို အပေါ်သွားနဲ့သာသာဖိကိုက်ထားရင်း မမမေပြီးသွားပါတယ်။ သူပြီးသွားတော့ တန်းမဆင်းသေးပဲ ကျနော့်ကိုပြုံးပြုးလေးကြည့်ရင်း လီးကိုအဖုတ်ထဲကမထုတ်သေးပဲ ကျနော့်အပေါ်ကိုမှောက်အိပ်လိုက်ရင်း ပါးလေးတွေကိုတယုတယနမ်းပေးတော့ ကျနော်လဲပြန်နမ်းပေးရင်း ‘မမမေ’ရဲ့ကျောပေါ်ကနေ သိုင်းဖက်ထားလိုက်ပါတယ်။ မိနစ်အနည်းငယ်လောက် အဲ့အတိုင်းမှေးပြီးနောက် ကျနော့်ဘေးမှာဝင်လှဲရင်း ‘မောင်လေးကထိန်းနိုင်သားပဲ’တဲ့ ကျနော်လဲပြန်ပြောလိုက်တယ် ‘ဟီး..ဟီး ကျနော့်အရမ်ြး
ကိုက်တဲ့မမကို ရှယ်ပြုစုပေးချင်လို့ဆေးစားထားတာ’လို့ပြောတော့ သြော်.. လူလည်ဆိုပြီး ရယ်ဖြီးဖြီးနဲ့ပြောတယ်လေမမက။ ခဏအနားယူပြီးတဲ့နောက် ‘မောင်မပြီးသေးဘူး နောက်တစ်ချီချစ်ဦးမယ်’ပြောတော့ ‘မောင့်သဘော မောင်သဘော’တဲ့ ငြုတုတုအသံလေးနဲ့ပြောတော့ ကျနော်လဲအူယားပြီးဖက်နမ်းလိုက်တယ်။ နောက်ထပ်နာရီဝက်လောက်လိုးလိုက်ပါတယ် ပုဇွန်တုပ်ကွေးစတိုင် လှေကြီးထိုးရိုးရိုးနည်းနဲ့ပဲဆိုကြပါစို့ဗျာ။ အဲ့လိုနာရီဝက်လောက်လိုးပြီးတော့ ကျနော်လဲပြီးချင်လာတာနဲ့
‘မမ မောင်ပြီးတော့မယ် မောင့်လီးကိုစုပ်ပေးဦးနော်’ဆိုတော့ ထထိုင်ပြီး ကျနော့်လီးကိုစုပ်ပေးပါတယ်။ ပလွေကလဲကျွမ်းတယ်ဗျို့ လီးဒစ်ပတ်ပတ်လည်ကို သူ့လျှာဖျားလေးနဲ့ထိုးကလိပေးလိုက် ထိပ်ကလေးကိုလျှာဖျားလေးနဲ့ကလိပေးလိုက် လီးတစ်ချောင်းလုံးကိုငုံပြီးစုပ်ယူလိုက်နဲ့ သူ့ကိုကျနော်ယက်ပေးတုန်းက ကောင်းလွန်းလို့သူကော့ပျံနေသလိုပဲ ကျနော့်မှာလဲအား..အင်းနဲ့ငြီးရင်း ကော့ပျံအောင်ကောင်းလွန်းနေပါတယ်။ ‘မမ မောင်ပြီးတော့မယ်’ဆိုတော့ ‘မမပါးစပ်ထဲပြီးလိုက်’လို့ပြောတယ်လေ အဲ့လိုနဲ့မမကပလွေပေးနေရင်းပဲ ကျနော့်သုက်ရည်တွေကို မမပါးစပ်ထဲမှာပဲထုတ်လိုက်ပါတော့တယ်။ မမကကျနော့်ရဲ့သုက်ရေတွေကို ထွေးမထုတ်ပဲမျိုချလိုက်တယ်လေ။ ကျနော်လဲအားရကျေနပ်သွားေ
တာ့ မမနဲ့ကျနော်၅မိနစ်လောက် ဖက်အိပ်ရင်းစကားလေးတွေပြောကြတော့မှ ကျနော်လိုးပေးတာအရမ်းကောင်းကြောင်း သူ့ယောကျာင်္းလီးနဲ့ကျနော့်လီး အရွယ်အစားချင်းအတူလောက်ရှိကြောင်း နောက်ကိုလဲအခါအခွင့်သင့်တိုင်း ဒီလိုဟိုတယ်မှာတွေ့ကြဖို့အကြောင်း နှုတ်လုံမယ်ဆို တစ်သက်လုံးပေးလိုးမယ့်အကြောင်း စသည်ပြောဖြစ်ကြပါတယ်။ အဲ့လိုနဲ့စကားလေးတွေပြောပြီး သန့်ရှင်းရေးလုပ်အဝတ်အစားဝတ်ပြီး ဟိုတယ်ကပြန်ထွက်လာကြပါတော့တယ်။